गृहपृष्ठ ७ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, १० महिनामा भित्रियो ६०६ अर्ब ६८ करोड
समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७५ बैशाखसम्ममा रु. ६०६ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.२ प्रतिशतले बढेको थियो । खुद ट्रान्सफर आप्रवाहमा भने ०.१ प्रतिशतले कमी आई रु.६९२ अर्ब २३ करोडमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १०.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या (पुनः श्रम स्वीकृति बाहेक) समीक्षा अवधिमा ६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३.९ प्रतिशतले घटेको थियो । चालू खाता एवम् शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो वर्षको दश महिनामा चालू खाता रु. ७ अर्ब ५७ करोडले घाटामा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा सो घाटामा उल्लेख्य विस्तार भई रु. १९१ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा आयात उल्लेख्य रहेकाले चालू खातामा उच्च घाटा भएको हो । फलस्वरुप, अघिल्लो वर्षको दश महिनामा रु. ५३ अर्ब ८१ करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर समीक्षा अवधिमा रु. १८ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह रु. १५ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी रु. ११ अर्ब ६१ करोड रहेको थियो ।
पछिल्लाे - व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन चुलिदै, चीन तर्फको निर्यात भने बढ्यो
अघिल्लाे - अब्बल बन्दै बैंकहरु, निक्षेप संकलनमा ११ प्रतिशतको वृद्धि